अदुवा विक्रीबाट साढे तीन अर्ब भित्रियो – NewsAgro.com
अदुवा विक्रीबाट साढे तीन अर्ब भित्रियो
इलाम, २३ चैत / अदुवा विक्रीबाट यो वर्ष इलाममा करीव रू.साढे तीन अर्ब भित्रिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ७०/७१ मा तीन अर्ब रू. ३९ करोड ६१ लाख ३७ हजार ५ सयबराबरको अदुवा निकासी भएको हो ।
जिल्लामा तीन हजार २ सय ३३ हेक्टर जमिनबाट ४५ हजार ८ सय ९४ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको छ । उत्पादनमध्ये रोप्नका लागि बीउका रूपमा २० प्रतिशत छुट्याइने गरिएको छ । उत्पादित अदुवामध्ये २० प्रतिशत अन्य प्रयोजनका लागि छुट्याएर ३६ हजार ७ सय १५ मेट्रिक टन विक्री भएको कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी बुद्धिराम भट्टराइले जानकारी दिए ।
यस वर्ष माउ तथा बच्चा उत्पादन मौसममा अहिलेसम्मकै उच्च भाउ आएको थियो । किसानले सरदर प्रतिकिलो रू. ९३ मा अदुवा विक्री गरेका थिए । उत्पादित अदुवा झापाको काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत निकासी भएको छ । जिल्लाका अधिकांश गाउँमा फस्टाएको अदुवाखेतीले किसानको जीवनस्तर माथि उठेको छ । अघिल्लो वर्षमा अदुवाको मूल्यमा केही बढोत्तरी भएपछि उत्पादन क्षेत्रसमेत वृद्धि भएको छ । किसानले गत वर्षकोभन्दा दुई प्रतिशत बढी क्षेत्रफलमा अदुवाखेती गरेको बताइएको छ ।
उत्पादित अदुवामध्ये करीव ९० प्रतिशत भारतमा र १० प्रतिशतमात्रै स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको छ । बोसे, जिरे, मकवानपुरे, कपुरकोटे, जातका अदुवाखेती यहाँ हुने गरेको छ । आशालाग्दो भाउ आएपछि किसानले न्यूनतम पाँच मनदेखि २० मनसम्म अदुवा रोप्ने तयारी गरेका छन् । अदुवाखेतीमा नयाँ प्रविधि लागू गरेपछि उत्पादनसमेत बढेको किसान बताउँछन् । भारतको पञ्जाव, सिक्किम र आसाम राज्यमा अदुवाको उत्पादन कम भएकाले नेपाली अदुवाले राम्रो मूल्य पाएको मङ्गलबारेका व्यापारी तारा थापाले बताइन् ।
यसपटक अदुवाबाट किसानले धेरै आम्दानी गरेको थापाको भनाइ छ । केही वर्षयता अदुवाको मूल्यमा व्यापक सुधार आएपछि किसान हौसिएका छन् । चार वर्षयता अदुवाले प्रतिमन एक हजारभन्दा धेरै मूल्य पाउँदै आएको छ । यसअघि रू. ३ सय प्रतिमन विक्री गरेका किसानलाई यसपालि अदुवाले उकासेको छ । रोगका कारण अदुवा बगान नै सखाप भए पनि किसानले बालीको क्षेत्रफल भने बढाउँदै लगेका छन् । जिल्लाको फाकफोक, नामसालिङ, गोदक, बरबोटे, मङ्गलबारे, सोयाङ, दानाबारी, चिसापानी, पञ्चकन्या, एकतप्पालगायतका गाविसमा अदुवाको उत्पादन बढी भएको छ ।
← घासँको वीउले आम्दानी बढाउदै
रेन्बो ट्राउट माछापालनमा लगानी अभाव →